I-Cabanatuan Studio 203-I-WiFi esheshayo Yamahhala
Cabanatuan City, Nueva Ecija, i-Philippines
I-inthanethi ye-WiFi engu-5mbs yamahhala, imizuzu engu-10 uhamba ngezinyawo uye ku-SM Mall Cabanatuan entsha. Indawo emaphakathi ekahle, ukuhamba ngezinyawo noma ngamabhayisikili amathathu ukuya ezibhedlela, Ihholo Ledolobha, Ihholo Lezobulungiswa kanye nezindawo zokudlela. Indawo yokupaka egalaji evikelekile.
Efulethini lomndeni elivikelekile, elizimele nelinobungani, eliqhele ngamamitha angama-30 ukusuka kumgwaqo omkhulu kaZwelonke. Kuhle kwabahamba bodwa, izithandani, izihambi zebhizinisi nama-Balikbayans.
I-TV ye-LED, i-aircon, amanzi ashisayo, ifriji, i-microwave, isitofu kanye nezinsiza zokupheka. Isevisi yokuwasha ekhokhelwayo iyatholakala.
Ifulethi lesitudiyo lihlala ngesitayela sethu sezimboni esiphefumulelwe isakhiwo esinezitezi ezi-3 esinokhonkolo ophucuziwe, ukugeza umcako kanye nokuqedwa kodonga olupendiwe. Igumbi lestudiyo elifakwe esilingweni esiphezulu linempahla ye-Ikea futhi linomdwebo odongeni waseParis City.
4.70 ·84 okushiwo abanye
4.70 · 84 okushiwo abanye
Indawo ehlala kuyo "i-barangay" encane kodwa ematasatasa eduze nomgwaqo omkhulu kazwelonke. Kuyaqiniswa ngokwakhiwa kwezindlu ezinesitezi eziningi ezihlanganisa nesakhiwo sokuhlala somndeni wethu. Njengoba kuvulwa i-Cabanatuan City SM Mall kanye nokwakhiwa okuseduze kwesakhiwo esisha seSibhedlela Sedolobha, indawo eyakhelene nayo isiba indawo ekahle yokuhlala eDolobheni laseCabanatuan.
Ubaba wami osewathatha umhlalaphansi usebenza kwa-airbnb futhi uhlala phansi. Enobungane futhi ewusizo anganikeza iseluleko lapho sidingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cabanatuan City namaphethelo